Sonke Sizonda Ugaxekile nokubizwa Okubandayo ... Kuze Kube Singabazi | Martech Zone
Sonke Sizonda Ugaxekile nokubizwa Okubandayo… Kuze Kube Hhayi
NgoLwesine, Juni 15, 2017 NgoLwesihlanu, ngoJuni 16, i-2017 Douglas Karr
NgoMeyi 15th, ngithole i-imeyili engingacelwanga (aka SPAM) evela enkampanini e-Atlanta ingitshela ukuthi iyini ividiyo echazayo. Ngangazi ukuthi kwakuyini, thina kubhalwe ngamavidiyo achazayo kabanzi futhi sanyathelisa ezimbalwa ezethu. Angizange ngiphendule i-imeyili. Ngemuva kwesonto, ngithola enye i-imeyili enenothi efanayo. Ngemuva kwesonto, enye. Nami angiphenduli. Ama-imeyili amane angizange ngiphendule noma ngichofoze isixhumanisi kuwo.
Siqale ukusebenza neklayenti elisha futhi siziqinisile izidingo zabo zokubeka uphawu kwesibambiso esisakha kabusha. Olunye lwamaphrojekthi wesikhathi esizayo esaziyo ukuthi sizobhekana nawo yividiyo echazayo yabo. Ngakho-ke, njengoba ngiphendula impendulo ethile ngesibambiso esisha esisakhile, ngithola enye futhi i-imeyili evela enkampanini yamavidiyo echazayo.
Kwakungekho zixhumanisi zokuzikhipha ohlwini ku-imeyili, futhi kwakungekho zazo Inikwe amandla yi- ama-logo… kodwa ngiyaqiniseka ukuthi ubesebenzisa ithuluzi lokuzenzekelayo lokuthengisa. Ummeleli wezentengiso ufake ezinye izixhumanisi zomsebenzi wabo wakamuva ku-imeyili wathi bangathanda ukunikela ngesaphulelo ukuze basebenze nami kuphrojekthi yokuqala. Nginyakazisa umunwe wami phezu kwesixhumanisi sesibonelo imizuzwana embalwa ngicabanga ukuthi ngabe kuzoba kuhle noma cha… bese ngichofoza.
Indawo engichofoze kuyo bekuyividiyo echazayo yeminithi elingu-1. Yayinopopayi ngokuphelele, yayinengoma enhle kakhulu, futhi nemisindo yayixubene. Ijubane layo alizange liphuthume nakancane futhi laliyikhwalithi ehlukile. Lokhu kungaba yisivumelwano okungafanele ngisidlulise ngakho ngaphendula ngolwazi lwephrojekthi yami entsha ngachofoza ku-send.
Kungakapheli umzuzu, ucingo lwami lwakhala futhi kwakungumfana owayengithumelele umyalezo ongacelwanga masonto onke. Uvele wafona ukuthola eminye imininingwane futhi wayejabule ukubona ukuthi bangasiza yini. Wayengacindezeli, wayengazami ukungivala, futhi wachitha isikhathi esithile efunda ngebhizinisi lami nangamakhono ethu. Siqede ingxoxo naye ethembisa ukuthi uzolandelisa ngesilinganiso ekuseni.
Siyakuzonda… Kepha Kuyasebenza!
Nginesiqiniseko sokuthi ngizoshaywa nge-inthanethi ngokuba ngumthengisi we-imeyili ovuma obala ku:
Empeleni senza okungacabangeki futhi ngokuchofoza isixhumanisi ku-imeyili ye-SPAM.
Kulungile, ungitholile. Kepha uyazi ini? Le ejensi kungenzeka isanda kuthola iklayenti elisha elizobanikeza umsebenzi oqhubekayo kule nkundla. Futhi ngingahle ngithole umlingani omangalisayo ongasikala ukugqwayiza ngentengo ebiza kakhulu. Uma ngivala ukwenza amavidiyo ambalwa okuchaza kubo, umvuzo wawungaphezulu kakhulu kwengozi yazo zombili izinkampani.
Sonke siyamemeza futhi simemeze ngoGaxekile nangezingcingo ezibandayo… kepha sidinga ukuthembeka impela ngokusebenza kwazo. Ukumaketha kumayelana nomkhiqizo, ukubekwa, nentengo. Kulokhu, umkhiqizo yilokho ebengikudinga, ukubekwa kufakwe ngesikhathi esifanele, futhi intengo ibilungile.
Lokhu akusho ukuthi ngizokhuthaza amaklayenti ami ukuthi aqale UKUKHIPA ukukhwabanisa kwabantu… kepha ngibona ngokuphelele ukuthi kungani amabhizinisi ekwenza.
Tags: imeyiliizingcingo zokuthengisaama-imeyili okuthengisaugaxekileengacelwangaizingcingo zokuthengisa ezingacelwangai-imeyili yokuthengisa engacelwanga
Ukuqonda Izidingo Zamakhasimende Akho nge-Predictive Analytics
UJun 16, 2017 ngo-11: 11 AM
Ngivumelana nawe. Okusemqoka lapha ukuthi ucwaningo lubalulekile. Kufanele sikhuthale ekwenzeni lolo cwaningo futhi siqonde abathengi bethu abangaba khona. Ngicabanga ukuthi ezikhathini eziningi sithola ukucasuka okuncane ngoba kungenzeka ukuthi sike sabhekana nokumakwa KWE-SPAM futhi sathola intshisekelo encane yokujabula ukumaka abanye njengoGaxekile. Lolu hlobo lwezinto lungalimaza amabhizinisi; isikhathi eside. Ngithole i-imeyili ebandayo izolo ebusuku ivela komunye umuntu obezama ukungithengisa ngezinsizakalo zokuqukethwe, ekuqaleni bengizokumaka njengogaxekile, kepha angikwazanga ukuzenza. Wayengenaso isixhumanisi se-unsub, noma. Ngivele ngakuveza lokho ngathi, "cha, ngiyabonga." Ngicabanga ukuthi sidinga ukubona umehluko phakathi kogaxekile we-phishy. Labo abathi, "thatha lesi sengezo esisha," noma "yenza ama- $ 1,000 ngosuku, ekhaya"; Ngokusobala lokhu kungugaxekile, akukho okubhekiswe kukho. Ngicabanga ukuthi uma umthengisi enze ucwaningo olwanele ukwazi ukuthi uyamaketha futhi akulethele i-imeyili enikela ngensizakalo yokumaketha, kulungile. Vele ungagunci bese uthi, “cha, ngiyabonga” futhi lokho kuzokwenza. I-imeyili ayipheli, noma ukubiza amakhaza.